Wasiirkii labaad ee Galmudug ka tirsan oo ka hadlay Muddo kororsiga | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirkii labaad ee Galmudug ka tirsan oo ka hadlay Muddo kororsiga
Tan iyo wixii ka dambeeyay 12 -kii April oo ahayd markii muddada loo kordhiyay Farmaajo iyo labada Hay'adood ee dowladda waxaa soo kordhayay hadal heynta ku aaddan muddo kordhintaasi
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii labaad ee ka tirsan Dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aaddan muddo kororsiga iyo sida aysan sharciga u ahayn!
Wasiiru dowladha madaxtooyada Galmudug Cumar Shiddo ayaa shalay beeniyay waraaq ay si wada jir ah u soo saareen saddexda maamul goboleed Hirshabeelle, Galmudug iyo KG iyo Gobolka Benaadir taasoo lagu taageerayo muddo kordhinta Golaha Shacabka, waxa uu sheegay wasiirku inuusan waxba ka jirin qoraalka, islamarkaana yahay been-abuur!
Wasiirka Amniga gudaha Galmudug horayna u ahaa Xildhibaan Qaran Golaha Shacabka BJFS Axmed Macallin Fiqi ayaa isna ka hadlay arrinta ku aadan muddo kororsiga iyo sidoo kale sharci ahaanta wixii ka dhacay Golaha Shacabka ee Af-duubka u ekaa!
Fiqi ayaa yiri "Calaamadaha siyaasadeed ee aakhiru-samaanka waxaa ka mid noqday: baaq ninkii loo tiirinayey inuu qoray laga tuugayo inuu sheegto, ka dibna taageero!" isagoo ula jeeda waraaqdii shalay kasoo baxday saddex DG iyo Gobolka Benaadir oo ay madaxtooyadu qoratay, madaxweynaha Galmudugna laga tuug-tuugayo ilaa iyo hadda inuu sheegto, islamarkaana uu taageero muddo kororsiga!
Sax ahaanshiyaha sharciyadda lagu sameystay Muddo kororsiga isagoo ka hadlaya Wasiir Fiqi wuxuu yiri "Waxaa isweydiin mudan; Xildhibaanada waxaa soo doortay ergo matalaysay dadweynaha uu xildhibaanku matalayo, haddana ayagii ayaa si iskood ah isku doortay muddo laba sano ah, madaxweynaha waxaa doortay labada aqal ee Barlamaanka federaalka muddo 4 sano ah, haddana hal aqal oo golaha shacabka ah ayaa yiri waxaan u kordhinay laba sano!"
Wasiirka ayaa aad u dhaliilay arrinta ku saabsan muddo kordhinta waxa uuna tilmaamay in ay ognahay murankii sanadihii la soo dhaafay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada qaarkood oo ku saabsanaa mudadooda Xil-haynta iyo sida ay sharcidarro ugu tilmaamaysay Villa Somalia.
Ugu dambeyntiina wuxuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa su'aal isagoo yiri "Haddii sidaas uu arrinku u fudud yahay maxaa mudada sanadka ku dhow dadka iyo dalka loo xiijinayey?. tan kalase maxaa sanadaha la isugu yareeeyey oo intaas looga baaqsan waayey?"